Yoshuwa 15 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
15 Kwaye iqashiso+ lesizwe soonyana bakaYuda ngokweentsapho zabo laba kumda wakwaEdom,+ intlango yaseTsin,+ ukuya ngaseNegebhi+ ngakumzantsi wayo. 2 Yaye umda wabo wawusuka ekupheleni koLwandle lweTyuwa,+ kwitheku elijonge ngasemzantsi. 3 Kwaye waphuma waya ngasemzantsi ekunyukeni kweAkrabhim+ wawelela eTsin+ wenyuka ukusuka ngasemzantsi ukuya eKadeshe-bharneya+ waza wadlulela eHetseron wenyuka waya eAdare wajikeleza iKarka. 4 Yaye wadlulela phambili eAzemon+ waphumela kwintlambo yaseYiputa;+ kwaye isiphelo somda saba selwandle. Lo yaba ngumda wabo osemzantsi. 5 Yaye umda wasempuma wawuluLwandle lweTyuwa ukuya kuma ekupheleni kweYordan, kwaye umda kwimbombo esemantla yayilitheku lolwandle, ekupheleni kweYordan.+ 6 Kwaye umda wenyuka ngeBhete-hogela+ wadlulela kumntla weBhete-arabha,+ kwaye umda waya elityeni likaBhohan+ unyana kaRubhen. 7 Umda wenyuka waya eDebhiri kwintili yaseAkore+ wajika waya ngasemantla eGiligali,+ engaphambi kokunyuka kweAdumim, engasezantsi kwentlambo; yaye umda wawudlulela kumanzi ase-En-shemeshe,+ kwaye isiphelo sawo sasise-En-rogele.+ 8 Umda wenyuka waya kwintlambo yonyana kaHinom+ ukuya ethambekeni lamaYebhusi+ ngasemzantsi, oko kukuthi, eYerusalem;+ umda wenyuka waya phezulu entabeni ejongene nentlambo yaseHinom ukuya ngasentshona, engasekupheleni kwentili yamaRefa+ ukuya ngasentla. 9 Umda wawumiswe ukusuka phezulu entabeni ukuya kumthombo wamanzi aseNefetowa,+ waphuma waya kwizixeko zeNtaba ye-Efron; umda wawumiswe eBhahala,+ oko kukuthi, eKiriyati-yarim.+ 10 Yaye umda wawujikeleza ukusuka eBhahala ngakwintshona yeNtaba iSehire uze udlulele kwithambeka leNtaba iYeharim ngasentla, oko kukuthi, iKesalon; wehlele eBhete-shemeshe+ udlulele eTimna.+ 11 Umda wawuphuma ngethambeka lase-Ekron+ ukuya ngasentla, kwaye umda wawumiswe eShikeron udlulele kwiNtaba yeBhahala uze uphume uye eYabhineli; yaye isiphelo somda sasiselwandle. 12 Umda wasentshona wawuluLwandle Olukhulu+ nonxweme lwalo. Lo yayingumda macala onke, woonyana bakaYuda ngokweentsapho zabo. 13 Yaye uKalebhi+ unyana kaYefune wamnika isabelo phakathi koonyana bakaYuda ngokomyalelo kaYehova kuYoshuwa, esisesi, iKiriyati-arbha ([kuthiwa uArbha] nguyise ka-Anaki), oko kukuthi, iHebron.+ 14 Ngoko uKalebhi wabagxotha apho oonyana baka-Anaki abathathu,+ abangaba, uSheshayi+ noAhiman noTalemayi,+ abo babezelwe nguAnaki.+ 15 Ngoko wenyuka ukusuka apho waya kubemi baseDebhiri.+ (Igama leDebhiri ngaphambi koko laliyiKiriyati-sefere.)+ 16 Yaye uKalebhi wathi: “Nabani na obetha iKiriyati-sefere aze ayithimbe, ngokuqinisekileyo ndiya kumnika uAkesa+ intombi yam abe ngumfazi wakhe.” 17 Koko uOteniyeli+ unyana kaKenazi,+ umntakwabo Kalebhi, wayithimba. Ngako oko wamnika uAkesa+ intombi yakhe ukuba ibe ngumfazi wakhe. 18 Yaye kwathi ngoxa wayegoduka, waqhubeka emthundeza ukuba acele umhlaba kuyise. Ngoko waqhwaba izandla zakhe ngoxa wayese-esileni. Waza uKalebhi wathi kuye: “Ufuna ntoni?”+ 19 Ngoko wathi: “Ndinike intsikelelo, kuba undinike isiqwenga somhlaba ongasemzantsi, yaye umele undinike iGuloti-mayim.” Ngako oko wamnika iGuloti engaseNtla neGuloti eseZantsi.+ 20 Eli yayililifa+ lesizwe soonyana bakaYuda+ ngokweentsapho zabo. 21 Yaye izixeko ezisekupheleni kwesizwe soonyana bakaYuda ngakumda wakwaEdom+ ngasemzantsi waba yiKabhetseli+ ne-Edere neYagure, 22 neKina neDimona neAdada, 23 neKedeshe neHatsore neItenan, 24 iZifi neTelem+ neBheyaloti, 25 neHatsore-hadata neKeriyoti-hetseron, oko kukuthi, iHatsore, 26 iAmam neShema neMolada,+ 27 neHatsare-gada neHeshmon neBhete-pelete,+ 28 neHatsare-shuwali+ neBher-shebha+ neBhiziyotiya, 29 iBhahala+ neIyim ne-Etsem,+ 30 ne-Elitoladi neKesili neHorma,+ 31 neTsikelage+ neMademana neSanesana, 32 neLebhawoti neShilehim neAyin+ neRimon;+ zizonke izixeko zazingamashumi amabini anesithoba, nemizi yazo. 33 EShefela+ kwakukho iEshtawoli+ neTsora+ neAshna, 34 neZanowa+ ne-En-ganim, iTapuwa ne-Enam, 35 iYarmuti+ neAdulam,+ iSokho+ neAzeka,+ 36 neShaharayim+ neAditayim neGedera neGederotayim; izixeko ezilishumi elinesine nemizi yazo. 37 ITsenan neHadasha neMigdali-gadi, 38 neDileyan neMizpe neYoketeli, 39 iLakishe+ neBhotsekati+ ne-Eglon,+ 40 neKabhon neLamam neKitilishe, 41 neGederoti, iBhete-dagon neNahama neMakeda;+ izixeko ezilishumi elinesithandathu nemizi yazo. 42 ILibhena+ ne-Etere+ neAshan, 43 neIfeta neAshna neNetsibhi, 44 neKeyila+ neAkezibhi+ neMareshaha;+ izixeko ezisithoba nemizi yazo. 45 IEkron+ needolophu eziphantsi kwayo nemizi yayo. 46 Ukusuka e-Ekron ngasentshona yonke esecaleni kweAshdode nemizi yayo. 47 IAshdode,+ iidolophu eziphantsi kwayo nemizi yayo; iGaza,+ iidolophu eziphantsi kwayo nemizi yayo, kude kuse kwintlambo yaseYiputa, noLwandle Olukhulu nommandla okufuphi nalo.+ 48 Nakummandla weentaba zaseShamire neYatire+ neSokho, 49 neDana neKiriyati-sana, oko kukuthi, iDebhiri, 50 neAnabhi ne-Eshtemo+ neAnim, 51 neGoshen+ neHolon neGilo;+ izixeko ezilishumi elinanye nemizi yazo. 52 IArabhu neDuma ne-Eshan, 53 neYanim neBhete-tapuwa neAfeka, 54 neHumta neKiriyati-arbha, oko kukuthi, iHebron,+ neTsiyore; izixeko ezisithoba nemizi yazo. 55 IMahon,+ iKarmele neZifi+ neYuta, 56 neYizereli neYokedam neZanowa, 57 iKhayin, iGibheya neTimna;+ izixeko ezilishumi nemizi yazo. 58 IHalehule, iBhete-tsure neGedore, 59 neMaharati neBhete-anoti ne-Elitekon; izixeko ezithandathu nemizi yazo. 60 IKiriyati-bhahali,+ oko kukuthi, iKiriyati-yarim,+ neRabha; izixeko ezibini nemizi yazo. 61 Entlango yiBhete-arabha,+ iMidin neSekaka, 62 neNibheshan nesiXeko seTyuwa ne-En-gedi;+ izixeko ezithandathu nemizi yazo. 63 Ke wona amaYebhusi+ awayehlala eYerusalem,+ oonyana bakaYuda abazange bakwazi ukuwagxotha;+ yaye amaYebhusi aqhubeka ehlala noonyana bakaYuda eYerusalem de kube namhla.